Askarigii xabada ku dhuftay gabadha soomaalida ah Grønland oo la sheegay inuusan qalad galin - NorSom News
Askarigii xabada ku dhuftay gabadha soomaalida ah Grønland oo la sheegay inuusan qalad galin
Kooxda booliska Norwey u qaabilsan baarida iyo xukumida danbiyada ka dhaca askarta ka tirsan booliska(Spesialenheten) ayaa ugu danbeyn soo saaray warbixin ay ku qiimeenayaan dhacdadii uu nin ka tirsan booliska Norwey xabad caloosha uga dhuftay hooyo soomaali ah oo degan magaalada Oslo. Kooxdan oo loo xilsaaray iney xaqiijiyeen in askarigu uu ku khaldanaa inuu xabad isticmaalo ayaa warbixintooda kusoo gabagabeeyay in uusan sameyn wax khalad ah, markii uu xabad ku ridayay gabadhan soomaalida ah. Ayagoo sheegay in xaalada markaas meesha ka jirtay aysan u saamixin ninkan inuu qiimeeyo awooda uu isticmaalayo nooca ay noqon karto. Sidaas darteedna ay laaleen dacwadii loo heystay maadaama uusan ku kicin fal danbi ah. Waxayna sheegeen in ay go aankan ay gaareen kadib markii ay waraysteen 10 qof oo markhaati ka ahaa dhacdadan, ay dhagaysteen codkii laga duubay dhacdadan, arkeena dhamaan warbixinadii ay soo gudbiyeen Follo politidistrikt oo baareysay dhac-dadan Oslo ka dhacday september sanadkii 2015. Kooxdan ayaa intaas ku dartay in ay sidoo kale baarayeen in ay ninkan xabada ay ka fakatay iyo in kale, iyada ooxaqiijiyay in xabada uu askarigu ridey oo aysan ka fakan.
Halkan ka akrhi warbixinta kooxdan oo dhamaystiran
Halkana ka akhri Aftenposten ama NRK oo ayaga wax ka qoray dhacdadan maanta.
Previous articleXildhibaan ka tirsan xisbiga FRP oo soo dhaweeyay heshiiska ku saabsan celinta soomaalida aan sharciga helin
Next articleHadliye oo iska fogeeyay inuu heshiis la galay dowlada Norwey